Inqubomgomo Yemfihlo - IGolden Laser
Kule webhusayithi, ungajabulela noma iyiphi insizakalo enikeziwe, njengokufaka i-oda, ukuthola usizo, ukulanda amafayela nemisebenzi ebambe iqhaza. Ngaphambi kokuba ukwenze lokho, kudingeka ukuthi ugcwalise imininingwane yakho yomuntu siqu esingakunikeza ngayo ukukhetha okufanelekile futhi sikukhulule umklomelo uma kukhona.
Qaphela: Ezinye izixhumanisi ezikule webhusayithi, zikusiza nje kalula futhi zizokukhipha kule webhusayithi, okusho ukuthi iGolden Laser yethu ngeke ithathe noma yimuphi umthwalo wemisebenzi yakho nolwazi kwamanye amawebhusayithi. Ngakho-ke noma yimaphi amanothi mayelana nezixhumanisi eziya engxenyeni yesithathu yewebhu azobe engaphezulu kwalo mbhalo wobumfihlo.
04) Ukuphepha Kwemininingwane
05) Amakhukhi Ukusetshenziswa
Amakhukhi ayizingcezu zedatha ezakhiwa lapho uvakashela iwebhusayithi yethu futhi ezigcinwe enkombeni yamakhukhi kukhompyutha yakho. Azisoze zachitha noma zifunde idatha kwikhompyutha yakho. Amakhukhi abamba ngekhanda iphasiwedi yakho bese upheqa isici esizosheshisa ukusefa kwakho kuwebhu yethu ngesikhathi esizayo. Futhi ungawenqaba amakhukhi uma ungafuni.
06) Memezela Ukuguqulwa
Ukuhunyushwa kwalesi sitatimende nokusetshenziswa kwewebhusayithi kungokwakwaGolden Laser. Uma ngabe le nqubomgomo yobumfihlo iguquka nganoma iyiphi indlela, sizobeka inguqulo ebuyekeziwe kuleli khasi futhi siqaphele nosuku onyaweni waleli khasi. Uma kunesidingo, sizofaka uphawu olwenzekayo kuwebhu ukukwazisa.